Va Mnangagwa, vodzi havasi kufara nemari yakapiwa bazi ravo mubhajeti yegore rino
Ndira 26, 2011
Gurukota rebazi rezvekudzivirirwa kwenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vanonzi havasi kufara nemari yakapiwa bazi ravo mubhajeti yegore rino. VaMnagwagwa vanonzi vakataura mashoko aya ku Zimbabwe Staff College of the Joint Command, vachiti mari yavakapiwa ishoma zvikuru kuti iite basa rinodiwa muchiuto.
VaMnangagwa vanonzi vakatiwo kuti bazi ravo rishande zvaknaka nemari yavakapihwa, rinofanirwa kudzikisa huwandu hwemauto ari munyika kubva pamakumi mashanu neshanu ezviuru kusvika pamakumi mana ezviuru zvemauto. Vanoti bazi ravo rakapiwa mari inoita 194 million dollars yekushandisa gore rino.
Patience Rusere weStudio7 aita hurukuro nechizvarwa chezimbabwe chakamboshanda ne Zimbabwe National Army kwemakore manomwe uye vari sachigaro veMDC Veterans association ku South Africa, VaSolomon Chikowero, kuti tinzwe maonero avo pabhajeti yakapihwa bazi raVaMnangagwa.
Hurukuro naVaSolomon Chikhowero